Idaft Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Idaft Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Raha mpankafy mozika ianao ary gamer koa dia eto izahay miaraka amina fampiharana Android mahatalanjona izay fantatra amin'ny anarana hoe idaft Apk. Io no fampiharana lalao Android tsara indrindra, izay manolotra anao hilalao lalao samihafa momba ny mozika rock sy ny tononkira.
Betsaka ny olona, ​​izay te hahafantatra momba ny mozika. Ka io no fomba tsara indrindra hanatsarana ny fahaizanao amin'ny teny sy mozika. Ny fialamboly sy ny fianarana dia zavatra roa samy hafa, saingy ity fampiharana ity dia manolotra azy roa ho iray. Afaka mianatra ianao rehefa mankafy azy io.
Araka ny fantatrao dia iray amin'ireo mozika elektronika tsara indrindra manerantany i Draft Punk. Izahay dia mizara momba azy ireo satria ity rindranasa ity dia mifandray amin'ny hirany tsara indrindra hoe "Harder, Better, Stronger, Faster", izay iray amin'ireo hira tsara indrindra miaraka amin'ny mozika sy ny tonony tsara indrindra.
Misy fiasa samihafa amin'ity fampiharana ity, izay hizara aminao ao amin'ilay faritra eto ambany. Raha hampiasa an'ity fampiharana ity ianao dia amporisihinay ianao hahafantatra momba ity fampiharana ity alohan'ny hampiasana azy. Noho izany mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy ary hizara ny hevi-dehibe rehetra amin'ity fampiharana ity izahay.
Topimaso momba ny Idaft Apk
Izy io dia fampiharana Android maimaim-poana, izay novolavolain'ny atin'akanjo. Io no fampiharana tsara indrindra hianarana momba ny melody sy ny tonony. Izy io dia manolotra lalao ahafahanao mampihatra ny fahaizanao mozika. Afaka mahazo lalao vaovao sy hafa koa ianao.
Araka ny fantatrao dia misy ankizy an-tapitrisany te-hianatra momba ny zavamaneno sy ny tononkira, saingy amin'ny fotoana sasany noho ny fahasosorana, dia tsy notohizany. Noho izany, amin'ny alàlan'ity fampiharana ity dia ho hitanao fa mahaliana, ny milalao lalao samihafa izay mifandray amin'ny mozika ihany koa.
Azonao atao koa ny manova ny tononkira araka ny fomba fanaonao. ny Lalao 2D dia manolotra anao fitambarana teny azonao isafidianana araka ny mozika. Raha manolotra ny hira fototra 'Harder, Better, Stronger, Faster ary tsy maintsy misafidy tononkira mitovy amin'izany ianao.
Idaft Jamming Apk koa dia manolotra anao hanao toy ny mpitendry mozika, izay tsy maintsy hamenoanao ireo hira amin'ny alàlan'ny feon-javamaneno samihafa valo ambin'ny folo. Ny feo tsirairay dia tsy mitovy amin'ny hafa fa ny feo rehetra dia mifandray amin'ny Daft Punk.
Manolotra anao lalao izy io, izay mila kitihina eo amin'ny boaty. Ity dia lalao boaty, izay misy boaty samihafa misy teny ao aminy latsaka avy eo an-tampon'ny efijery anao. Tokony tapinao izy ireo rehefa tonga eo amin'ilay toerana izy ireo. Manolotra mozika ambadika izy ary rehefa manendry eo amin'ny boaty ianao dia hovahana ny lyric ary mila mamita ilay hira ianao handresena.
Anaran'ny fonosana dk.underware.idaft
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 2.3.3 sy ambony
Endri-javatra manan-danja amin'ny Idaft App
Raha milaza ny saika ny zava-drehetra momba an'ity rindranasa ity izahay, dia afaka mizaha endri-javatra misimisy kokoa amin'ny fizahana azy. Noho izany, hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe an'ity fampiharana ity aminao izahay eto amin'ny lisitra eto ambany.
Lalao sy fihomehezana
Tsara kalitao amin'ny feo
Ahoana ny fampidinana Idaft Apk?
Noho ny antony sasany dia tsy hita ao amin'ny Google Play Store ity fampiharana ity. Saingy hizara rohy miasa azo antoka sy miasa amin'ity rindranasa ity izahay. Noho izany, mila mahita fotsiny ianao ary tsindrio ny bokotra fampidinana. Eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity no misy azy.
Raha vao mikitika azy ianao dia miandry segondra vitsy dia hanomboka ho azy ny fisintomana. Aza adino ny mamela ny 'Loharano tsy fantatra' avy amin'ny Security Security alohan'ny fizotry ny fametrahana.
Idaft Apk no fampiharana tsara indrindra, izay ahafahanao mankafy mandritra ny fianaranao. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity ary manomboka manao ny mozikanao amin'ny fombanao. Mitsidika hatrany ny Website ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa.
Sokajy Games, Puzzle Tags Lalao 2D, idaft Apk, idaft App, idaft jamming Apk Post Fikarohana
Mpanaraka 1K ao amin'ny Instagram ao anatin'ny 5 minitra [Fitaovana Vaovao 2022]
MoshUp Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]